‘व्यवसायीलाई रातारात विस्थापित गर्न नपाउने कानुन बनाउनुपर्छ’ – Chitwan Post
‘व्यवसायीलाई रातारात विस्थापित गर्न नपाउने कानुन बनाउनुपर्छ’
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, साउन ११, २०७५
नेपाल घरबहाल उपभोक्ता मञ्च चितवनले गत असार २९ गते संस्थाको आठौँ स्थापना दिवस मनाएको छ । संस्थाले सामाजिक उतरदायित्व वहन गर्दै यो वर्ष साप्ताहिक कार्यक्रम आयोजना गरेर दिवस मनायो । २०६७ सालमा सडकबाट सुरू भएको संस्थाले २०६८ मा विधिवत्रुपमा दर्ता भएर बहालमा बस्दै आएका व्यवसायीहरुको हकहितको क्षेत्रमा काम गर्दै आइरहेको छ । प्रस्तुत छ, यसै विषयमा केन्द्रित रहेर चितवन पोष्ट दैनिकले संस्थाका अध्यक्ष पवित्रा जोशीसँग गरेको साक्षात्कार-
१. बहालमा बस्दै आएका अधिकांश व्यवसायीलाई घरबहाल कर आफँले तिर्नुपर्ने बाध्यता छ, यसका लागि मञ्चले के गर्दैछ ?
— बाध्यता होइन, नेपाल सरकारको कानुनी तौरतरिका नमिलेकोले यस्तो समस्या भएको हो । राज्यको नीतिनियम नै फितलो हुँदा यो समस्या आएको हो । तर, अघिल्लो वर्षदेखि हामीले केही प्रतिशत घरबहाल कर घरधनीलाई नै तिराउन सफल भएका छौँ । कतिपय व्यवसायीले समस्या खुलाउन सकेका छैनन् । यो समस्या समाधानका लागि घरबहाल कर व्यवसायीले तिर्दै आए पनि कर तिरेको बिलको प्रमाण राख्नोस्, त्यसैलाई आधार मानेर मासिक भाडा कटौती गर्न सकिन्छ भनेर व्यवसायीलाई भन्दै आइरहेका छौँ ।
२. घरबहाल कर घरधनीले नै तिर्नुपर्छ भन्ने जानकारी नभएर यो समस्या आएको हो ?
— कतिपय घरधनीलाई थाहा नभएर पनि हुन सक्छ । तर, कतिपय घरधनीलाई थाहा भएर पनि सकेसम्म घाटा किन सहने भनेर पनि नतिरेका हुन सक्छन् । त्यसैले, हामीले यस विषयमा घरधनीलाई बुझाउँदै आइरहेका छौँ । प्रत्यक्षरुपमा व्यवसाय नगरे पनि घरधनीका लागि घरभाडा नै आम्दानीको स्रोत भएकोले राज्यलाई कर बुझाउनुपर्छ भनिरहेका छौँ । वास्तविक भाडाको आधारमा घरबहाल कर तिरिदिनोस् भनिरहेका छौँ । यसबारे हामीले स्थानीय सरकारको पनि ध्यानाकर्षण गराइसकेकाले यो समस्या समाधान हुँदैछ ।
३. सबै घरबहालमा बस्दै आएका व्यवसायीहरुको मुद्दा घरबहाल मञ्चले पूरा गर्न सकेन भन्ने गुनासो छ नि ?
बहालवाला व्यवसायीले आफ्नो व्यवसाय घरबहालमा पनि दर्ता गर्नुप¥यो । समस्या आफैँभित्र लुकाएर पनि समाधान हुन्छ त ? व्यवसायी साथीहरुमा नै समस्या छ कि उहाँहरुलाई हामीले संस्थामा आउन पटकपटक आग्रह गर्दा पनि उहाँहरु आउन चाहनुभएको छैन । समस्या लिएर घरबहालमा गयो भने घरभेटीले तत्काल निकालिदिन्छन् भन्ने अघिकांश व्यवसायीलाई डर छ । त्यसैले पनि उहाँहरुले आफ्नो समस्या लुकाएर राख्नुभएको छ । संस्थामा आएका हरेक समस्यालाई समाधान गर्न संस्थाले पहल गरिरहेको छ । केही यस्ता विवाद छन्, ती विवादलाई संस्थाले पनि समाधान गर्न सक्ने अवस्था छैन ।
४. विवाद भन्नाले ?
— घरभाडामा बसेका व्यवसायीलाई बत्ती, पानी, पार्किङ, शौचालयको व्यवस्था छैन । अर्को कुरा, दिनानुदिन भाडा वृद्धि गरिदिन्छन् । यही विषयमा घरधनी र व्यवसायीबीच बेलाबेला विवाद भइरहन्छ । दिनानुदिन भाडा बढाउने सोच भएका घरधनीले सम्झौता गर्नै चाहँदैनन् । विश्वासको आधारमा व्यवसायीले लगानी गर्छन् । व्यवसाय फस्टाएको देखेपछि भाडा बढाइदिन्छन् । त्यसमा सम्झौता नै नभएपछि हामीले कसरी कार्यान्वयन गर्ने ?
५. व्यवसाय राम्रो भएको देखेपछि घरधनी आफैँ व्यवसाय गर्छु भनेर व्यवसायीलाई हटाउने समस्या पनि छ नि ?
— सबै औँला बराबर छैनन् । कतिपय घरधनीहरुले भूकम्प र बाढीपहिरोको समयमा १५ दिनसम्मको भाडा नै नलिएका उदाहरण पनि छन् । कतिपय घरधनीले त्यसबारे मतलबै राख्दैनन्, आफ्नै स्वार्थमात्रै हेर्छन् । त्यस्तै समस्या समाधान गर्नका लागि यो संस्थाको जन्म भएको हो । त्यसैले, भाडा र समयका लागि व्यवसायी र घरधनीबीच कुरा मिल्यो भने लिखित सम्झौता गरेर बस्नुपर्छ । भोलि सम्झौताविपरीत काम भयो भने कारबाही गर्न सजिलो हुन्छ । त्यसैले, एकआपसमा परिपूरक बनाउनका लागि पनि लिखित सम्झौता आवश्यक छ ।
६. तर, सबै बहालवाला व्यवसायीलाई मञ्चमा ल्याउन सकिएको छैन नि ?
— म अध्यक्ष भएर आएको दुई हप्तापछि हामीले नेपाल सरकारलाई यसै विषयमा ज्ञापन पत्र बुझाइसकेका छौँ । सरकारले पनि त्यसलाई सकारात्मकरुपमा लिएको हामीले महसुस गरेका छौँ । सरकारले यसबारे लिखित कानुन नै बनाएको छ, भदौ १ गतेदेखि लागू हुने गरी । तर, घरधनीलाई आवश्यक परेको खण्डमा ३५ दिनभित्र घर खाली गर्नुपर्छ भन्ने बुँदाप्रति भने हाम्रो आपत्ति छ । यसलाई विनियम ल्याएरै भए पनि संशोधन गरिनुपर्छ भनेर माग गरिरहेका छौँ । कुनै पनि घरधनीले कुनै एउटा बहानामा रातारात व्यवसायीलाई विस्थापित गर्न नपाउने कानुन बनाउनुपर्छ । यो कानुन आइसकेपछि सबै बहालवाला व्यवसायीलाई संस्थामा ल्याउन पनि सहज हुन्छ ।
७. अबका भावी योजना ?
— व्यवसायीले कर तिर्नैपर्छ । र, घरबहाल कर घरधनीले नै तिर्नुपर्छ भनेर हामीले सरकारसँग माग गरिरहेका छौँ । स्थानीय सरकारले व्यवसायीमाथि लगाइएको कर व्यवसायको प्रकृति हेरेर लगाउनुपर्छ भनेर पनि आवाज उठाइरहेका छौँ । कर बाध्यताले होइन, रहरले तिर्ने हो । सरकारले व्यवसायीका लागि करमात्रै बढायो, त्यहीअनुसारको सेवासुविधाको व्यवस्था गर्न सकेन । बैंकले ब्याज बढाउँदा र घरधनीले अत्यधिक भाडा बढाउँदा पनि सरकार चुप लागेर बसिरहेको छ । यसबारे सरकारले विचार गर्नैपर्छ । व्यवसायीसँग बृहत् छलफल गरेर करको दर निर्धारण गर्न सक्नुपर्छ ।
जसको हात उही जगन्नाथ
राष्ट्रभाषा मास्ने पो ठूला विद्वान् !
‘कोरोनाको महामारीमा व्यवसायीहरुलाई पुनःस्थापना गर्नु राज्यको दायित्व हो’
विशेष अन्तर्वार्ता : विश्वव्यवस्था तयारै नभएको भाइरसविरुद्ध लडिरहेका छौँ : परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली
‘कुमाता’मा पत्रकारिताकै दौरानमा भेटिएका पात्र र प्रवृत्तिहरु छन्’
‘हामीले शिक्षालाई उचाइमा पुर्‍याएका छौँ’
गीत–संगीतबाट अलग भएको छैन : बुद्धिसागर बस्याल
‘पर्यटकलक्षित सुविधासम्पन्न होटल आजको आवश्यकता हो’